भ’र्खरै वि’मान दु’र्घ टना हुँ दा १४ ज नाको मृ ’त्यु, म नमा मा या भए #RIP लेख्नुहाेस् ! – News543Online
भ’र्खरै वि’मान दु’र्घ टना हुँ दा १४ ज नाको मृ ’त्यु, म नमा मा या भए #RIP लेख्नुहाेस् !
February 13, 2021 adminLeaveaComment on भ’र्खरै वि’मान दु’र्घ टना हुँ दा १४ ज नाको मृ ’त्यु, म नमा मा या भए #RIP लेख्नुहाेस् !
थपियो बज्रपात: विमान दुर्घटना हुँदा १४ जनाको मृ’त्यु, मनमा माया भए #RIP लेखकोलम्बियामा एउटा विमान दुर्घटना हुँदा १४ जनाको मृत्यु भएको छ । भिल्लाभिसेन्सियोबाट ताराइरा जाँदै गरेको डाउग्लास डीसी–थ्री विमान दुर्घटनामा परेको हो । ३० सिट क्षमताको विमान प्राविधिक खरावीका कारण दुर्घटना भएको हो । विमानमा चालकले प्राविधिक समस्या आएको जानकारी दिएलगत्तै विमान सम्पर्क विहीन भएको थियो । त्यसको एक घण्टापछि विमान दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
मागेको कुरा २४ घण्टा भित्र पुुरा हुन्छ ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस !पुरा पढनुहोस
ओलि सँग झुक्दैनौ घुडा टेकाएरै छोड्छौ राम कुमारी झाँक्री